Yohimbine: Na-eji + mmetụta + Yohimbine Mgbakwunye Na Ọrịre
1. Akwukwo osisi Yohimbine
2. Nkọwa-Gịnị Bụ Yohimbine HCL?
3. Kedu Ihe Yohimbine Jiri?
4. Nweta uru site n'aka Yohimbine
5. Yohimbine na ogige ndị ọzọ
6. Kedu ka m ga - eji yohimbine?
7. Ihe ize ndụ ndị nwere ike iburu Yohimbine
8. Nyocha Yohimbine
9. Nbudata Yohimbine maka ire ere
Maka ngwaahịa nke nwere nyocha ato ise maka nhazi nke nkwụsị na dịka mgbakwunye ọnwụ, ị nwere ike ịtụkwasị obi na Yohimbine. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị gbasara uru bara uru, nyocha Yohimbine, usoro Yohimbine, Yohimbine ji ya na ozi ndị ọzọ dị mkpa gbasara ọgwụ ọjọọ a na-adịghị mma.
Akwukwo osisi Yohimbine
Akụkọ banyere Yohimbine si n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa pụta, ebe e jiri ya mee ihe dị ka omenala nke ndị na-agwọ ọrịa nke ọma. Ọ bụ ezie na ụmụ amaala ji ogbugbo Yohimbe mee ihe n'ọtụtụ ụzọ, ụzọ mbụ ọ na-eji eme ihe bụ ịgwọ ọrịa ndị mmadụ. Yohimbe a ga-egwepịa ogbugbo ma jikọta ya na herbs ndị ọzọ iji mepụta ọgwụ dị mma nke osisi. A makwaara ya dika "osisi ima".
Nkọwa –Gịnị bụ Yohimbine HCL?
Yohimbine (146-48-5) bụ nri na-adọrọ adọrọ na-adọrọ adọrọ nke nwere ọtụtụ uru bara uru ebe ọ ga - enyere mmadụ aka ịnọgide na - enwe ahụ ike dị mma yana ịkwalite ịdị ike mmekọahụ. N'agbanyeghị na ị nọ n'elu shelves ogologo oge karịa Viagra, ọ dị oké mkpa na ị na-ekpokọta ozi niile dị banyere mgbakwụnye ahụ tupu ewere ya. Okere maka gị, isiokwu a na-amalite inye gị nkọwa niile ị chọrọ ịma. Na-eduzi na Uru Uru na Egwu Ejila
Taa, yohimbine achọtala ebe kwesịrị ekwesị dị ka ọgwụ eji ede ọgwụ nke ejiri agwọ ọrịa. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nwere obi abụọ na-etinye ya dịka otu n'ime aphrodisiacs, ọmụmụ sayensị na-enye ihe akaebe na-egosi na yohimbine Hydrochloride (Yohimbine HCL) bụ otu.
Ndị dọkịta na-edepụta ụdị nke yohimbine tozuru etozu maka ndị ọrịa chọrọ enyemaka ntakịrị na ndụ mmekọahụ ha. Ngwaahịa nke oge a nwere ihe ndị na-arụ ọrụ nke ewepụtara site na ogbugbo nke osisi Yohimbe na-adịchaghị osisi. Dị ka ọgwụ ọgwụ ọgwụ, a na-akpọkarị ya yohimbine hydrochloride (CAS 65-19-0) ma kwuo na ọ bụ alkaloid. I nwekwara ike ichota Yohimbine na mpempe akwụkwọ na ụdị capsule ma rere ya dị ka 98% ntụ ntụ dị ọcha. A na-ere Yohimbine n'ikike ya nwere ịgwọ ọrịa adịghị ike yana inye aka na ọnwụ ọnwụ.
A na-ekwenye na ihe na-arụ ọrụ na ogbugbaYohimbe igbochi ndị nabatara alpha-2 adrenergic nke na-ekere òkè na igbochi nrụpụta. Ọ na-akwalitekwa ịhapụ nitric acid nke na-eme ka akwara ọbara gbasaa ya wee nwekwuo ọbara na-eru akụkụ ahụ mmekọahụ.
Ọ bụkwa nnukwu abụba na-ere ọkụ karịsịa maka iwepu abụba ndị isi ike. A na-eji ngwaahịa ahụ enyere aka na ọnwụ dị mkpụmkpụ n'ime obere oge. Mgbakwunye nke ahịhịa na-eme ka ogo adrenaline dịkwuo n'ahụ. Ọ na-arụkwa ọrụ megide usoro nchịkwa nke na-egbochi ire ọkụ abụba.
Kedu ihe Yohimbine Jiri?
Eji ya na-emeso Erectile Dysfunction
Ọ bụrụ na nwoke enwee mmekọahụ aghara aghara, o nwere ike ime ka ọ ghara ịna-akwanyere onwe ya ùgwù. N'ịbụ onye ọtụtụ ihe kpatara, ọrịa a na-emetụta ọtụtụ ụmụ nwoke n'ụwa niile. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ na-arịa ọrịa a na-ejide onwe ha na ntanetị nke ndị na-akpa nkata na-apụnara ha naanị ma ọ bụ mee ka ọnọdụ ahụ ka njọ. Agbanyeghị, taa enwere ọgwụgwọ nke sitere n'okike nke na-enye ha ohere izu ike ọfụma n'ihi na ọ bụghị naanị na ọ dịkwa mma mana ọ dịkwa irè. Ọtụtụ ụlọ ahịa nri ahụike na-akwaliteYohimbe ogbugbo wepụ dị ka aphrodisiac na-arụ ọrụ nke na-akwalite ịkwa iko na ọgwụgwọ maka adịghị arụ ọrụ.
Na-agba ume nkwụsị arọ
Ị nwere ike ije ije ngwa ngwa dịka i nwere ike afọ iri gara aga? Na-agba ọsọ ọsọ ọsọ dị ka ị nwere ike n'oge gara aga? Ọ bụrụ na nzaghachi gị abụghị, mgbe ahụ ị nwere ike inweta ụfọdụ ibu. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịnwa ịzụ na iri nri, nke Yohimbine utịp nwere ike ịka mma. Ọ bụ ụzọ magburu onwe ya isi kpochapụ ibu arọ na-enweghị iji oge gị niile na mgbatị ahụ ma ọ bụ gbuo onwe gị. Yohimbine HCL (65-19-0) nwere ike inyere mmadụ aka inweta ma jigide ibu ahụ siri ike. Nke a bu ihe okike mmụba ọnwụ ọnwụ nwere ndị nabatara adrenergic alpha-2 dị na mkpụrụ ndụ abụba. Inweta ya na-eduga n'ịba ụba abụba na ọnwụ. Mgbe iwesa tupu ma ọ bụ n'oge mgbatị ahụ ọ na-eme ka mmebi abụba dị elu. Ọ na-egbochi agụụ na agụụ na nsonaazụ ya, na-ebelata ogo oriri. A na-etinye Yohimbine n'ime mmemme mmebi ọnwụ dị ka akụkụ nke nri siri ike na mmega ahụ maka ịrụ ọrụ nke ọma.
Ihe dị njọ nke na ọ bụghị naanị ime ka ọdịdị gị dị mma kamakwa ọ na - egbochi gị ọnọdụ dị ka cholesterol dị elu, ụra ehi ụra, ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, ọrịa obi na ọtụtụ ndị ọzọ. Ozugbo ị na-ewere Yohimbine, ị na-amalite njem ugbu a na-ahụ ike ma na-adaba adaba nke gị.
Nweta uru dị n'aka Yohimbine
Na-emeso Erectile Dysfunction
Mụ nwoke ndị nwere nsogbu na - enwe oge siri ike na ndụ mmekọahụ ha - agbanyeghị, Yohimbe wepụ na - emekọrịta ihe a site na ịkwalite nrugharị ọbara na akụkụ mmekọahụ. Ọ na - enyere aka belata mgbaàmà nke adịghị arụ ọrụ, na - eme ka ọmụmụ mmadụ nwekwuo ike yana ọ na - eme ka agụụ mmekọahụ nwee ume. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu na mmekọahụ gị, mgbe ahụ yoyohimbine nwere ike bụrụ azịza kachasị mma maka gị. Ọ bụ ezie na ụmụ nwoke na-ejikarị aphrodisiac ọgwụ, ụmụ nwanyị nwere obere libido nwekwara ike irite uru na ya.
Emeghị ka ọbara gbasaa
Ọ bụrụ na usoro mgbasa ọbara gị adịghị nwayọ, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịnagide nwayọ nwayọ nwayọ, ogo ume dị ala, na igwe ojii na-eme ihe. N'ọnọdụ dị otú ahụ mgbe ahụ ị nwere ike ịchọrọ vasodilator. Yohimbe bụ vasodilator zuru oke ọ bụghị naanị n'ihi na ọ bụ ihe okike kamakwa n'ihi na ọ bara uru. Ọ na-agbasa arịa ọbara nke n'aka nke ya na-eme ka ọbara na-erugharị wee si otú a na-ebute nri na oxygen dị mkpa na akụkụ niile na sel niile. Ihe niile ị chọrọ bụ ịgbakwunye ntakịrị yohimbine na mgbakwunye akwụkwọ nri gị iji melite ọgwụgwọ gị, cognition ma melite ogo gị.
Na-ebelata mgbali elu
Mgbe esemokwu dị na arịa ọbara dị mfe, ahụike obi gị ka mma. Ọ bụrụ na akwara ọbara gị siri ike ma sie ike, ọ pụtara na obi gị ga-arụ ọrụ okpukpu abụọ karịa ka ịpupu ọbara n'ime ahụ nke nwere ike ime ka ọbara mgbali elu. Ọnọdụ a nwere ike ibute ọrịa strok, igbochi arịa ọbara na nkụchi obi. Mgbe ị gbakwunye yohimbine na nri gị, ị nwere ike belata ohere nke ọrịa akwara obi.
Ihe ọzọ bara uru Yohimbe dị na ya mgbe ọ na-ebelata. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ma ị nwebeghị ike ibulata mgbe ahụ igbochi ụfọdụ adrenoreceptors na ahụ gị nwere ike ịbụ ngwọta maka ọghọm ị na-aga nke ọma. Jiri nke Yohimbine mgbakwunye na-enye ohere maka ọkwa dị elu nke norepinephrine nke na - egbochi nchịkọta anụ ahụ na - eme ma na - edugakwa na abụba abụba na ahụ.
Mee ka mmemme n'egwuregwu rụọ ọrụ
N'elu inye aka na ọnwụ ọnwụ, Yohimbe na-emekwa ka ahụ ike dị elu ma belata mmetụta nke ike ọgwụgwụ. Ọ na - enyere aka ịbawanye ike mmadụ ji wee si otu a na - akwalite ogo ike gị.
Na-eme ka obi nkoropụ
Dopamine bụ hormone nke na-enyere aka na-eme ka ụbụrụ mmadụ na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ nke ọma. Mgbe usoro dopamine dị obere, ọ ga-abụ na ọ ga-enwe ike ọgwụgwụ, mgbanwe ọnọdụ na ikpe ikpeazụ na-eduga na ịda mba. Yohimbine nwere njirimara pụrụ iche nke amaara na-abawanye ogo dopamine wee belata mmetụta nke nhụsianya.
Na-emeso ọnụ ala akọrọ
Yohimbe na - eme ka mmiri si asọ mmiri. Ọ bụrụ na ị na-a medicationụ ọgwụ na-eme ka ọnụ gị kpoo, mgbe ahụ yohimbine ga-enyere gị aka ịnagide ọnọdụ ahụ. Akọrọ ọnụ ma ọ bụ xerostomia bụ ọnọdụ nke na-eme ka mmiri mmiri na-enweghị ike ịmepụta mmiri zuru ezu iji mee ka ọnụ gị dị mmiri nke na-abụkarị mmetụta dị n'akụkụ ụfọdụ ọgwụ ụfọdụ.
Ọ na-ebelata ọbara ọgbụgba
Clotkọchi ọbara gabiga ókè nwere ike ibute nkụchi obi, akụrụ arụ ọrụ, na ọrịa strok. Ihe omumu emere emeela ka nkwubi okwu na yohimbine nwere ike belata nkedo nke ọbara ebe o gbochiri ufodu ndi adrenoceptors ma na aru oru na igbanwe epinephrine ka noorepinephrine
Ọ na-ebelata nchegbu na egwu
Alingnagide nsogbu nchegbu nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ. Inwe egwu siri ike ọbụlagodi mgbe enweghị ihe egwu ọ bụla na-eme ka mmadụ ghara iru ala ma ọ nwere ike ịbụ oge kachasị egwu nke ndụ gị. N'oge a, ị nwere ike ịmaghị otu esi emeso ya ebe mbọ ọ bụla ị na-eme nwere ike ịkpata ọnọdụ ahụ ka njọ karịa ka ọ dị na mbụ. Ihe mgbakwunye Yohimbine egosiputala ụjọ na ọgụ ụjọ n'ụzọ dị irè. Ọ na-eme nke a site na ịbawanye ogo norepinephrine. Ozugbo nke a mere, ọnọdụ gị na-ebuli elu, na mmetụta mberede nke nchekasị na oke egwu agaghị enwe ọnọdụ ọ bụla na ndụ gị.
Ọ na-emeso ụdị ọrịa shuga 2 ụdị
Ọ bụghị ihe nzuzo na ọrịa shuga bụ otu n'ime ọnọdụ kachasị emetụta ndị mmadụ n'ụwa. Otu uru Yohimbine bụ na ọ na-ebelata glucose ọbara ma na-eme ka insulin na-abawanye. Ọ bụ nnukwu ụzọ iji gwọọ ụdị ọrịa shuga nke 2 n'ụzọ nkịtị, ihe ọmụmụ na-egosikwa na ọ dị irè dịka ọgwụ edepụtara na ọgwụgwọ ọnọdụ ahụ. Ọbụna nke ka mma Ọnwụ ọnwụ nke Yohimbine Mmetụta na-eme ka ọbara shuga dị n'ọbara na-eme ka ụdị ọrịa shuga 2 dị na mmiri.
Itnwere ike ime ka arụmọrụ na-arụ ọrụ
Mgbe uf od u, i nwere ike ich op uta onwe gi n 'on od u kwes ir i ekwes i kar i. Ikekwe na-arụ ọrụ na-achọ ọtụtụ echiche, ị na-amụ maka ule siri ike ma ọ bụ mgbe ị na-agbalị ịnweta ihe ọhụrụ. Ọrụ ọ bụla dị oke mkpa nwere ike ịchọ nlezianya na ọgụgụ isi ọzọ, na ebe ahụ bụ Yohimbine hcl na kemfe. Nnyocha e mere egosiwo na Yohimbine na-eme ka ị mara ihe na ụbụrụ gị iji rụọ ọrụ nke ọma. N'ihi ya, ịnwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla na-emetụta uche na ọbụnadị nwee ike ịme ọtụtụ ọrụ na-enweghị ike ịgwụ ụbụrụ gị.
Ọ dị mma na ncheta gị
You nwetụla mgbe gara aga ị chọburu ime ka ikike ncheta gị ka mma? Know maara na ncheta gị dị ntakịrị mgbe ị na-echefu ihe ndị doro anya dị ka ebe ị debere igodo gị ma ọ bụ chefuo azịza nke ajụjụ ị ka degharịrị. N'agbanyeghi na o nwere ike iyi, i nwere ike ime ka ncheta gi ka mma ma belata nchefu. Otu n'ime Yohimbine jiri bụ iji nyere aka melite ncheta gị. Ọ na-eme nke a site na ịbawanye ogo norepinephrine. Site n'iji ya eme ihe mgbe niile, ị nwere ike iwepụ ihe niile dị na ncheta gị ma cheta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile nke ozi ịchọrọ.
Ọ na-echebe akụrụ
Akụrụ bụ akụkụ dị oke egwu n'ime ahụ nke na-edozi ihe mkpofu, ya bụ, toxins, nnu, mmiri na-ekpuchi ma wepụ ya. Ọ bụrụ na a hapụrụ ihe mkpofu ahụ, ọ ga-emetụta ahụ anyị. Akụrụ na-ejikwa ọbara mgbali elu na acidity. Na ọrịa akụrụ na-ebili ọ dị mma ilekọta akụkụ a. Maka ndị ọrịa were Yohimbine, ọ nwapụtala iwelata mbufụt ma melite etu akụrụ si arụ ọrụ. I nwekwara ike iwere Yohimbine ma meziwanye ikike ịrụ ọrụ akụrụ gị.
O nwere ike inyere aka na ọgwụgwọ ọrịa ogbu na nkwonkwo
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ewere ya dịka akụkụ nke ịka nká, ọrịa ogbu na nkwonkwo nwere ike bụrụ ihe na-adịghị mma na ọbụna na-egbu mgbu. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịda mba ịnagide ọnọdụ a na mgbaàmà na-agbawa obi na-eso ya, ị nweghị enyemaka. Yohimbine na - ebelata nkwonkwo nkwonkwo ma n'otu oge ahụ ọ na - egbochi mmebi nkwonkwo ma na - eme ka ogo antioxidant dịkwuo elu. Mmetụta Yohimbine nwere ike inyere gị aka ibi ndụ dị mma site na ịdebe nkwonkwo gị.
Enwere ike iji ya belata ihe mgbu
Mgbu nwere ike ịdakwasị onye ọ bụla n’ime anyị n’oge ọ bụla. O nwere ike ịbụ ọrịa, ihe ọghọm ma ọ bụ mmerụ ahụ. N'ime ọtụtụ nyocha Yohimbine dị mma nke ndị mmadụ nyere, otu n'ime ha bụ ike ya ịkwụsị ihe mgbu. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ụzọ okike nke ibelata ihe mgbu na-enweghị ị toụ ọgwụ sịntetik ma ọ bụ ịhụ dọkịta, mgbe ahụ Yohimbine bụ ụzọ ị ga-aga.
Ọ nwere ike inye aka na nkedo clonidine
Clonidine bụ ọgwụ e nyere maka ịgwọ ọbara mgbali elu, mgbaàmà nke nkwụsị (site na ise siga, opioids, na mmanya), nsogbu nchekasị na ADHD. Ozugbo ọ na-ekpuchi ya, ọ pụrụ iduga na ọgbụgbọ, nhụjuanya, na ụra. Ọ dịghị mkpa ka ị nwee ụjọ; Yohimbine ga-eme nke a.
Yohimbine na ogige ndị ọzọ
N'ijikọta na Naloxone, ọ na-enyere aka na PCOS
Withnwe PCOS nwere ike ịbụ nnukwu nsogbu. Site n'ọtụtụ mgbaàmà na-egbu mgbu na inwe ihe isi ike mgbe ị na-achọ ịtụrụ ime, ọnọdụ ahụ nwere ike ime ka ike gwụ gị mgbe ị na-agbake. N'ihi mgbanwe nke hormonal na-akpata ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nwanyị ọ bụla nwere ike ịta ahụhụ na ya. N'ụzọ dị mma, Yohimbine (65-19-0) nwere ike iwepu ma ọ bụ belata ihe mgbaàmà achọghị site na ọrịa polycystic ovary. Ebe ọ bụ na ọnọdụ a jikọtara na ọnọdụ ahụike ndị ọzọ dị ka ọrịa cancer endometrial na ọrịa obi, ngwa ngwa ị na-ewere Yohimbine, ngwa ngwa ị ga-egbochi onwe gị pụọ na nsogbu ndị ọzọ.
Ya na Berberine, ọ na-egbochi mmebi mmebi nke Sepsis kpatara
Sepsis bụ ọnọdụ ahụike ebe anụ ahụ na-emerụ ahụ mgbe ahụ na-aza ọrịa. Berberine na Yohimbine (65-19-0) na - egbochi sel ndị na - alụso ọrịa ọgụ (neutrophils) ka ha ghara imebi ọtụtụ akụkụ ma belata mkpụrụ ndụ ndị ozi na-afụ ụfụ.
Kedu ka m ga - eji yohimbine?
Dika ihe ndi ozo di n'ime aru, o di nma iburu n'uche na ibu ihe ndi ozo adighi nma maka ahuike gi. Ya mere o di nkpa ka i mara ihe ziri ezi Yohimbine usoro onunu ogwu maka gị. Na omenala, a na-eji ogbugbo nke osisi Yohimbe a drinkingụ ihe ọ drinkingụ drinkingụ nke a na-enweta site na esi esi. N'ọnọdụ ndị ọzọ, a na-akụpịa ogbugbo ahụ ma jiri ya mee ihe na ntụ. Agbanyeghị, taa Yohimbine dị n'ụdị capsule nke dị adaba karịa. Thekpụrụ a tụrụ aro maka abụba Yohimbine bụ 20mg nke na-ekewa abụọ doses kwa ụbọchị maka mmetụta ka mma. Maka nkwụsịtụ, onye kwesịrị iji ihe dịka 42mg kwa ụbọchị.
A na-ekwu na yohimbine mgbakwunye ga-arụ ọrụ nke ọma mgbe ọ dị tupu ma ọ bụ n'oge nri ebe ọ nwere ike ibute oke insulin na ahụ na-abawanye nke ọma. Akpachara anya n'ihi na ụdị dị iche iche nwere ọnụọgụ Yohimbe dị iche iche. Ọ na-ewe ihe dị ka nkeji iri anọ na ise iji banye ya ma jiri ya rụọ ọrụ 45 awa tupu ị nwee mmekọahụ.
Ònye ekwesịghị iburu Yohimbine?
Tupu iwere mgbakwunye a, ị kwesịrị ịjụ onwe gị, Yohimbine ọ dị mma maka gị? Ihe dịgasị iche iche nwere ike ime ka ị ghara ị toụ ọgwụ a, ha gụnyere;
Akụkọ banyere ọrịa obi
Ọrịa ọbara ma ọ bụ ọbara mgbali elu
Ọnọdụ ahụike uche
Ihe ọzọ nwere ike ime ka ị ghara ịkwado maka mmeju a bụ ịtụrụ ime. Ọ bụrụ na ị nọ na mgbakwụnye a na atụmatụ ịtụrụ ime, ị ga-achọ ndụmọdụ dọkịta ahụ. A gwara onye ọ bụla nọ n'okpuru afọ iri na asatọ ka ọ ghara ịghara iji Yohimbine mee ihe.
Ihe ize ndụ ndị nwere ike ịnweta Yohimbine
Yohimbine ngwaahịa nwere ike ibute ihe ọghọm n'ihi ịdebanye aha na-ezighi ezi. Nnyocha e mere gosiri na n'etiti ngwaahịa 49 yohimbine nke a mụrụ naanị abụọ nyere ozi ziri ezi na akara ahụ. Ihe mgbakwunye nwere 0-12.1mg nke yohimbine, ebe ọ bụ naanị dose 5.4 mg ka a tụrụ aro.
Dodị ngwaahịa ahụ edepụtara na-ezighi ezi sitere na 23% -147% nke ego Yohimbine ha kwuru. Ihe ọghọm nke na-abịa na nke a bụ na ị nwere ike ị doseụ ọgwụ dị elu karịa ka ịkwesịrị ma nke a nwere ike ime ka ị taa ahụhụ na nsonaazụ na-emerụ ahụ.
Iji chebe onwe gị pụọ n'ihe ize ndụ Yohimbine, jide n'aka na ịzụta ihe mgbakwunye site na ika ị nwere ike ịtụkwasị obi. Gaa na ngwaahịa maka anwale maka nchekwa na mma.
N'ozuzu, na mgbakwunye ọ bụla, enwere mmetụta ndị ọzọ. Mmetụta Yohimbine dị ma ọ bụ nke siri ike ma ọ bụ nke dị nro. Ndị e kwuworo na ya kachasị bụ ọbara mgbali elu, nchekasị, mmụba nke obi, na nsogbu nke eriri afọ. Mmetụta ndị na-adịghị ahụkebe gụnyere nnukwu mmerụ akụrụ, njide, na nkụchi obi.
Otú ọ dị, ị kwesịrị ịdeba ama na mmetụta ndị a dị na ya n'ihi ịṅụ ngwaahịa ndị nwere ihe ndị ọzọ dị na Yohimbe ma ya mere ha ga-enyekwa aka na mmetụta ahụ. Sarm RAD140 (Testolone) Onye ọrụ gwara ya: Nyocha, Jiri usoro, Ihe ize ndụ
Yohimbine bụ otu n'ime ihe mgbakwunye kachasị dịrị nchebe ma ọ nwere ụfọdụ ihe egwu dị ka nsonaazụ siri ike na akara aha ngwaahịa ezighi ezi.
Yohimbine onye ọrụ nyocha
Uru Yohimbine nwere ike ịdị ezigbo mma na akwụkwọ, mana ị nwere ike ịchọ ịma ma ọ na-arụ ọrụ. Nke a bụ ụfọdụ nyocha Yohimbine anyị nwetara n'aka ndị ahịa anyị.
Ree ekwu, sị: 'N'ịbụ onye na-eri nri uche, agbasiwo m ike na uru. Site na nri dị iche iche na mgbakwunye na saunas. M ga-achọ enyemaka site n'aka onye ka ukwuu banyere àgwà oriri, ma na-enye obi ụtọ, enyere m aka. Kedu maka arọ m nwetaworị? Ọ dị m mkpa ịhapụ ya dịka ụnyaahụ n'ihi na ọ dịghị uwe m mara mma. M na-ejikọta Yohimbine na-arụ ọrụ, na enweghị m ike depụta ihe ọma niile m nwere ike ịhụ n'ime onwe m. Ana m agbada na 130 lbs site na 178 lbs. Aga m enye onye ọ bụla ga-achọ ịba ụba iji nwalee Yohimbine. '
Yu Yan kwuru, sị, "Azụtara m ngwaahịa a maka di m dị ka ụbọchị ọmụmụ ya mgbe ọ gụsịrị uru ya na ịntanetị. Ike ya na ume ya agbanwewo n'ụzọ dị ukwuu n'ime ma si n'ihe ndina. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọbara mgbali elu ya adalatala. Ọ nọgidere na-ekele m n'ihi na kemgbe ọnwa atọ gara aga, ndụ ịhụnanya anyị laghachiri ebe ọ dị afọ iri abụọ gara aga. Aga m akwado nke a nye onye ọ bụla. '
Fad sị, 'Echela na ị na-efufu ego gị mgbe ị na-azụ ihe mgbakwunye a. Na mbu, enwere m otu ihe ahụ ma kemgbe m malitere iji ya ihe dị iche. Enwetara m ọganihu dị na ụgbọala maka oge mbụ ebe m ruru 40s. Amalitere m inwe mmetụta dị iche iche mgbe izu izu mbụ m gasịrị, na mịbido dị ugbu a n'ogologo. Kedu ihe ọzọ m nwere ike ịrịọ? Ana m ekele Yohimbine. '
Wang kwuru, sị, `` Enweghị m olileanya ịmụ nwa. Ruo afọ asatọ gara aga, eletawo m ọtụtụ ndị ọkachamara n'ọrịa ụmụ nwanyị n'efu n'efu ruo mgbe nke ikpeazụ tụrụ aro ka Yohimbine tụbara m. M na-enwere ndị ọrụ ibe m anyaụfụ mgbe ha na-alakarị ụlọ iji lekọta ụmụ ha. Achọghị m ịkwa ákwá na ịchị ọchị nke ịmụ ụmụ bịara, ọ fọkwara nke nta ka m daa mbà n’obi. Yohimbine emeela ka ndụ m dị mma, enweghịkwa m ike ịzụtara nwa m nwanyị Yu ihe ọ bụla. Mụ onwe m bụ nna ugbu a, ndụ alụm di na nwunye bụ anyaụfụ nke ọtụtụ. A sị na m matara gbasara mgbakwunye ọrụ-ebube a afọ asatọ gara aga. O ruru penny ọ bụla. '
Dr. Khalid na-ekwu, sị, `` M na-ajụ ọtụtụ n'ime ndị ọrịa m na-arịa ọrịa na-adịghị arụ ọrụ iji jiri mgbakwunye Yohimbine mee ihe, ọ mechughịkwa ha ihu. Maka onye ọ bụla ike gwụrụ maka iji ọgwụ sịntetik mee ihe maka otu ihe ahụ ga-enwe ekele maka eziokwu ahụ bụ na Yohimbe bụ ihe okike na mmetụta dị n'akụkụ ya dị nwayọọ. Tụkwasị na nke a, ha jupụtara na uru ahụike ma, ya mere, ga-abara gị uru n'akụkụ gị niile.
Yan kwuru, "Enwere m oké obi ụtọ banyere Yohimbine ogwu n'ihi na ọ bụ nnọọ ihe kachasị njọ nke ngwaahịa m nara. Onye ọ bụla nke na-achọ ụzọ dị ọcha na nke a ga-esi mee ka ọ gbanyekwuo ego kwesịrị ịtụle ịga maka nke a. '
Becky kwuru, sị, "N'izu a nile, di m anọwo na mgbakwụnye ihe a, okwu ahụ bụ ihe na-enweghị isi bụ nnọọ okwu ekwesighi. Abụ m 35 ma lụrụ di na-ahụ n'anya, mana nsogbu ahụ bụ na ọrụ na ụmụaka emeela akụkụ ka mma nke ya. Ọ naghịzi enwe mmetụta, ma ọ bụrụ na o mee ya, ọ gaghị adịte aka. Ọ na-ewe ya tupu anyị enwee mmekọrịta chiri anya ma rụọ ọrụ. Ọ fọrọ nke nta ka m kwụsị, ma nke a emeela ka ọ bụrụ ezigbo aka. Ugbu a, anyị nwere ike ịnụ ụtọ onwe anyị. Amaara m na ọ ga-abụ onye ahịa ọzọ. '
Ihe mgbakwunye Yohimbine maka ire ere
Ikekwe onye ọ bụla n'otu oge na ndụ na-eji otu ma ọ bụ karịa mgbakwunye. Ma ọ bụ maka ọnwụ na-efu, mụbaa ike muscle ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke na-eme ka ndụ dịkwuo mma. Otú ọ dị ọtụtụ ga-ekweta na ọ bụghị ihe mgbakwunye niile dị irè ma ọ na-aga ebe ị zụtara ihe mgbakwunye? Ụfọdụ nwere ike ịbụ concoctions na-abaghị uru nke ga-abara ahụ gị uru n'ụzọ ọ bụla. N'ahịa taa, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ka na-ere ma ọ bụ na-agbapụ aka ọjọọ. Ihe mgbakwunye adịgboroja ahụ dịka ezigbo ngwaahịa, ị nwere ike daa maka ụgha naanị iji duped. Ụfọdụ nwere ike ọ bụghị naanị adịgboroja mana enwere ike ịnwe oke arụmọrụ nke ihe mwepụ ọrụ. Ọbụna njọ ndị ụfọdụ enweghi ike inwe nke ọ bụla.
Ọ bụ ya mere ịchọta onye ziri ezi na-ere maka ihe mgbakwunye gị dị ezigbo mkpa n'ihi na ị gaghị apụ apụ. Onye na-ere ma ọ bụ onye na-eme ihe ziri ezi na-anabata ihe ọ bụla ma ọ bụ nchegbu banyere ihe dị mma, ọnụahịa ma ọ bụ irè. Azịza ọ bụla a na-agụghị akwụkwọ, enweghị nchekasị ma ọ bụ na-ezighị ezi banyere ngwaahịa a kwesịrị ime dị ka ọkọlọtọ ọkọlọtọ mgbe ị na-eme atụmatụ ịzụta ihe mgbakwunye. N'amara gị, anyị nwere ike inyere gị aka nweta ihe kachasị mma ma a bịa n'ịkwụ ụgwọ, mmepụta, na àgwà.
Na Phcoker.com ị nwere ike mfe zụrụ Yohimbine online na ngosi ziri ezi ma nweta ya na ọnọdụ gị. Ikwesighi iche echiche ebe ị ga-azuta Yohimbine; anyị na-ahụ na ị na-enwe ọ theụ na ịzụ usoro na-kpomkwem ihe ị na iwu ka. Yabụ kedu ka esi zụta n'aka anyị?
Chọọ "Yohimbine (65-19-0)"
Dejupụta mpempe akwụkwọ maka ịzụta
Enwere ike ịrịọ gị ka ị jupụta ajụjụ gbasara ahụike dị mkpirikpi; jupụta ya ma debe ya. Onye ọkachamara anyị ga-enyocha ma eleghị anya ịnakwere usoro gị.
Ozugbo a kwadoro iwu gị, ị ga-akwụ ụgwọ maka ngwaahịa a ma chere Phcoker.com iji nye gị ya.
Mee ka anyị taa ma malite ịnweta ihe mgbakwunye iji nwee obi ụtọ Yohimbine sex mbanye, ọnwụ ọnwụ, na uru ahụike niile ọ na-abịa.
Yohimbine: Ihe niile I Kwesịrị Ịma Banyere Natural Aphrodisiac Jiri Na-arụ ọrụ na Erectile Dysfunction, Mee Ka Libido, ma Mee Ka Dịgharịa Mmekọahụ ma mee ka ị bụrụ onye ị chọrọ mgbe niile, Hilary Tony, CreateSpace Independent Publishing Platform, 1-34 peeji nke.
Yohimbine, Jesse Russell, Ronald Cohn, Akwụkwọ na-achọ, 2012, peeji nke 1-88.
Encyclopedia of Supplementary Dietary (Print), nke Paul M. Coates dere, M. Coates Paul, Marc Blackman, Marc R. Blackman, Gordon M. Cragg, Mark Levine, Jeffrey D. White, Joel Moss, Mark A. Levine, peeji nke 567-593.